December 17, 2006, 8:36 am Filed under: DawAungSanSuKyi အမှန်တကယ်တော့ ဒီရေးတဲ့စာတွေကို ၆လလောက် လက်လွှတ်ထားမလို့ပဲ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဖိုင်နယ်မှာ စာတွေမနိုင်မနင်းဖြစ်မှာကြောက်တာလည်းပါသလို အိမ်က လိုချင်တာ မလုပ်ပေးနိုင်မှာလည်း ပါပါတယ်။ ကျမရဲ့ part time အဖြစ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တဲ့ ဒီစာပေအချိန်တွေက full timeနီးပါး ဖြစ်နေတော့ ခဏတာ ခွဲခွာမလို့ပါပဲ။ သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်(၁၀)အတွက်တောင် ကျမစာရေးဖြစ်ချင်မှ ရေးဖြစ်မယ်။ ကျမ management အပိုင်းကို သင်္ကြန်မှာ စာမေးပွဲဖြေရမှာဆိုတော့ အားလုံးကအချိန်ကွက်တိဖြစ်နေတယ်။ ရတဲ့အချိန်ထဲကနေ ကျမ မရေးဖြစ်သေးတဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကို ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေကိုပုတ်ခတ်တဲ့သူများအတွက် ကျမပြန်လည်တုံ့ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ကပြင်းနေတော့ ရေးဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ကျမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသဲနှလုံးထဲက လေးစားရလွန်းသူအဖြစ် ချစ်ခင်တဲ့အတွက် သူမကိုထိခိုက်ပြောဆိုရင် အမှန်ဘက်ကနေ မဆိုင်းမငံ့ ပြန်လည်ချေပတတ်ပါတယ်။ ကျမအမေရင်းကိုချစ်သလိုမျိုး သူမကိုလည်း ကျမရဲ့ အမေလို ချစ်တဲ့အတွက် သူမနဲ့ပတ်သတ်တိုင်း အမှန်တရားတိုင်းကို ထိခိုက်လာရင် မငုံ့ခံတတ်ခဲ့ပါ။ ၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နှင့်မိုက်ကယ်အဲရစ်
မိန်းမတစ်ယောက်က အချိန်တန်ရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူရမှာဖြစ်သလို ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလည်း အချိန်တန်ရင် မိန်းမတစ်ယောက်ကိုယူရတယ်ဆိုတာ သိပ်ဆန်းကြယ်လှတဲ့ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာ ကိုယ်ယူတဲ့သူက လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားဖြစ်နေရင် သူနဲ့ကိုယ် ဘယ်လိုညှိနှိုင်းသွားကြမလည်း။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုတွေကို မပစ်ပယ်ရရင် ၊ သူလည်း နားလည်ပေးရင် ဒီအိမ်ထောင်ရေးကို ဘာမှဘေးလူက ၀င်ရှုံ့ချနေဖို့မလိုဘူး။ လူမျိုးခြားကိုယူထားတာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အရည်အချင်း ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ဘယ်ဘုရားကဟောထားခဲ့လည်း။ ဘေးမှ ပြေလည်နေတဲ့ ကိစ္စကိုလာရှုံ့ချတယ်ဆိုရင် သေချာတာကတော့ လာရှုံ့ချသူတွေက မနာလိုဝန်တိုခြင်းရှိနေလို့ (သို့မဟုတ်) တော်လွန်းနေတဲ့အရည်အချင်းတွေကို မပြိုင်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ နိုင်ငံအရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ အမေရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကို ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ အိမ်သာတက်ဖို့ အိမ်သာပေါ်ခြေလှမ်းနေတဲ့သူကို ထမင်းစားကောင်းရဲ့လားလို့ မေးနေတဲ့ ငအတွေနဲ့တူပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိုက်ကယ်အဲရစ်ကို ယူပြီးချိန်မှာ သူမမြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ထုံးလမ်းစဉ်လာတွေကို ပစ်ပယ်ခဲ့လို့လား။ သူမက အမြဲတမ်း မြန်မာဝတ်စုံကို ဆင်မြန်းပြီး သူမကို မြင်ကတည်းက လွန်စွာကျက်သရေရှိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့မငြင်းပါနဲ့။ အမေကို ၀င်ရိုက်ဖို့ အထက်က အမ်ိန့်အတိုင်းကြိုးစားတဲ့ ဗိုလ်မှုးမိန်းမတွေတောင် အမေအရှိန်အ၀ါကြောင့် ရိုက်လို့ရခဲ့လို့လား။ ခင်ဗျားက မွေးတဲ့ ခင်ဗျားတို့သမီးတွေ ၊ ဆွေမျိုးတွေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအပါအ၀င် ကျူပ်တို့အားလုံးလည်း ဘယ်တုန်းကများ မြန်မာဝတ်စုံကို အချိန်ပြည့်ဆင်မြန်းနိုင်လို့လည်း။ ရိုးရာဝတ်စုံကိုအမြဲဝတ်ပြီး အဖြူတွေနဲ့ပေါင်း မြန်မာပြည်ကို ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်း လာစွပ်စွဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ မြန်မာပြည်အတွက် အမေက သူမကိုယ်ကျိုးနဲ့ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ကြိုးစားပေးနေတာကိုမှ မထောက်ထားဘဲ ဆဲနေတဲ့ စစ်သားတွေက ကိုယ့်အမေနှလုံးသားကို ဓါးနဲ့ပြန်ထိုးနေတဲ့ ငမိုက်တွေနဲ့တူပါတယ်။ အချို့မြန်မာမိန်းမတွေက အဖြူကောင်တွေနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးရင် အမေစုကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်။ ဥပမာ လန်ဒန်က ရွှေမမပေါ့။ နရင်း၂ချက်လောက်တီးပစ်လိုက်ချင်တယ်။ အမေစုက သူမယောက်ျားကို တရားဝင်ယူထားသလို သူမယောက်ျားကပါ ပါဌိကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ဦးပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရွစိထိုးပြီးကဲနေတဲ့သူတွေ ဆီနဲ့ရေလိုကွာခြားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို သွားယှဉ်နေတာ ရီစရာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်အကျိုးကိုမငဲ့ဘဲ သူမဘာသာ သူမဘ၀အတွက် ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ သူမက သိပ်ကိုထူးချွန်တဲ့ ယူအင်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ။ သူမက သူမဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် မိန်းမတစ်ယောက်အင်အားနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတာကို ခင်ဗျားက မိုက်ရိုင်းစွာ ရှုံ့ချနေမယ်ဆို၇င် မိတ်ဆွေ သေချာတာတော့ ခင်ဗျား brain wash လုပ်သင့်ပြီ။ မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ တော်တဲ့ သူရဲကောင်းဆိုရင် မြန်မာမင်းတွေက သတ်ပစ်ပါတယ်။ ကျန်စစ်သားကို လှန်နဲ့ထိုးတော့ လှန်က ကြိုးကိုထိပြီး လွတ်မြောက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက သာဓကပါ။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုးတက်ထူးချွန်လွန်းနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ သူတို့က သူတို့နိုင်ငံသားရယ်မှ မဟုတ်ဘူး။ အခြားနိုင်ငံကနေ တအားတော်တဲ့သူတွေလာရင် လခကောင်းကောင်းပေး ၊ စည်းစိမ်တွေပေး ၊ ရာထူးတွေပေးပြီး သူတို့နိုင်ငံမှာပဲထားစေပါတယ်။ ဒါက သူတို့က သူတို့နိုင်ငံအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တော်တဲ့ကောင်ဆိုသတ်လို့ရရင်သတ်ပစ်ကြတယ်။ သတ်မရရင် အမှုဆင်ပြီး ဖမ်းထားတယ်။
၂) စိတ်ဓါတ်နှင့်လုပ်ရပ် အချို့သူများရဲ့ပြောကြားချက်ပါ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေ အထက်ဆင့်ထိ တကယ်လုပ်နိုင်တွေသူကိုမှ စကားပြောချင်တယ်လို့ပြောချင်သူတွေပါ။ မိတ်ဆွေတို့ပြောတာ မမှားပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့က စာရေးသူတွေကိုဆိုရင် အထင်မကြီးဘူး။ စာတစ်စောင် ပေတစ်လွှာထက် နအဖကို ဗုံးကျဲသူကို ပိုလေးစားမယ်ဆိုတာတော့ ကျမလည်းအတူတူပါပဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး အာပလာတွေပါဆိုပြီး အချို့က သိပ်အထင်သေးကြတယ်။ မိတ်ဆွေ ဘာကြောင့်လည်း သိချင်ရင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာပါ။ လက်ဖက်ရည်မှာ ထိုင်ပြီး ဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးကွ အော်နေရင်တော့ ဆင်ကန်းတောတိုးနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာလူမျိုး၁၀ယောက်ပေါင်းရင် အတွေးအခေါ်၁၀မျိုးထွက်လာတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ဘယ်နေရာမှာမဆို သွားရာလမ်းကြောင်းခြင်းမတူကြပေမယ့် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်တွေကတော့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ အချိန်တွေက ပြောင်းလာခဲ့ပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်က လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ခဲ့တုန်းက မြန်မာ့တပ်မတော်ဆိုတာ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တပ်မတော်က တကယ့် မှန်ကန်လေးစားရတဲ့ တပ်မတော်အစစ်ပါ။ အခုအချိန်မှာ တပ်မတော်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် မိုက်မဲနေတဲ့ လူတစ်စုကြောင့် အကုန်လုံးက ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ ခြေတစ်လှမ်း နောက်ရောက်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုလူတွေကသာ ပြန်လည်ချေမှုန်းမှာလည်းဆိုတာ လေးလေးနက်နက် တွေးရမယ့်အဆင့်ရောက်နေပါတယ်။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ဘယ်သူတွေက လုပ်ပေးမှာလည်း။ စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ပြီး စွန့်လွှတ်နိုင်သူအရေအတွက်က ပြန်လှည့်ကြည့်နေရသူ အရေအတွက်လောက် မများဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အသားထဲကလောက်ထွက်တွေကလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားမယ်ဆို၇င်တော့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်ပွဲတစ်ရပ်လိုဖြစ်နေတယ်။ အချိန်ကိုအရင်းပြုပြီး လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ထားတယ်။ ဒီယခုအချိန်မှာမှ ကျူပ်တို့ခင်ဗျားတို့မလုပ်ဖြစ်ရင် နောင်တစ်သက် သားစဉ်မြေးဆက် အကုန်လုံး ဒုက္ခရောက်ကြရမှာပဲ။ ၃) ကျမပြောချင်သောအကြောင်းတရား
ဒီတစ်ခါပြောမှာက ကျမ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပေးထားတဲ့ ချတ်ဗောက်စ်က အမည်မသိသူများရဲ့ စကားပါ။ `လင်းလက်ကြယ်စင်ကိုအမြင်မှန်ရစေချင်တယ်´ဆိုသောစကားတွေအတွက် တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ။ ဘယ်ဟာကို အမြင်မှန်စေချင်တာလည်း။ ပြင်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်က မှန်တာလွန်နေလို့ တစ်ဖက်ကမ်းရောက်နေတာကို ဘာကိုများပြင်ပေးမလည်း။ အချို့ကပြောတယ် `လင်းလက်ရိုင်းတယ်´။ ဒီစကားကို သက်နိုင်ဘလော့ခ်မှာလည်း ရေးထားပြီးသားပါ။ ဘိုးတော်ဘုရားဦးအောင်ဇေယျခေတ်ကနေ ယနေ့မြန်မာခေတ်သစ်စကားတွေအထိ အကုန်လုံးကျုပ်ပြောတတ်ပါတယ်။ နအဖအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ သတင်းကြေငြာသလို `ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထားခြင်း´အော်သလိုမျိုးတော့ မရေးတာအမှန်ပဲ။ ကျူပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ။ မကောင်းတဲ့ပထွေးကို ပထွေးလိုပဲ ခေါ်မယ်လို့။ အမေနောက်ယောက်ျားလို့ လှလှလေးမရေးဘူး။ စာဖတ်သူများကို ကျမ မလေးစားဘူးလို့ အချို့က လွှင့်ပြန်တယ်။ အမှန်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့သူက နေရာတိုင်းမှာ လိုက်မပြောဘူးဆိုတာတော့ ရှင်တို့ မမေ့ပါနဲ့။ ကျမက ကျမစာတွေအားလု့းကို ဖတ်သူတွေကိုလည်း လေးစားတယ်။ ဝေဖန်သူကိုလည်း လေးစားတယ်။ မိုက်ရိုင်းသူကိုတော့ ကန်တော့ဆွမ်း။ ကျမလိုချင်တာက စူးရှတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ အမှန်တရားကို ရင်ထဲနင့်အောင် ခံစားစေချင်တယ်။ ခံစားချက်ကနေ အားမာန်ဆိုတာ ဖြစ်တာပါ။ ခံစားမှုမဖြစ်၇င် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုက်ပုံနဲ့ပုဆိုးဝတ် ၊ ခါးမှာဟမ်းဖုန်းလေးချိတ်ပြီး စကားကိုလှလှလေးပြော မိုက်ရိုင်းယုတ်မာတဲ့ လူစားမျိုးထက်စာရင် အမှန်ကိုပြင်းပြင်းရှရှပြောတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်လူစားမျိုးကို ကျမ ပိုအထင်ကြီးပါတယ်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လွန်းစွာနဲ့ နားထဲချိုအီနေအောင်လည်း ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘလော့ခ်က romantic အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် တန်ရာတန်ကြေးကိုပဲ ရေးနေတာပါ။ ကျမကို ပါစင်နယ်အရ မုန်းသူတွေက `အမိယုတ်တော့နှုတ်ကြမ်း´တယ်လို့ တက်ပြောတယ်။ ဟားတိုက်ရီလိုက်ချင်တယ်။ ကျမပြည်ပရောက်လာချိန် ၊ နောက် နအဖနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးချိန်တွေမှာ သူတို့စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပိုသိလာရတယ်။ သူတို့တွေက အမှန်ကိုအမှားနဲ့တုမရဘူးဆိုတာ သိပြီးချိန်မှာ အမှန်ဘက်က ရပ်သူတွေကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာကနေ ထိုးစစ်ဆင်ကြတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျအောင် ၊ စိတ်ရှုပ်အောင် ၊ အမှားတွေ ဖြစ်သွားအောင် အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာသော လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကလည်း မြန်မာပြည်အခြေအနေကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်ရောက်လာချိန်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး ပိုသိသွားရတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဖြစ်အင်အမှန်တွေကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရတယ်။ ယခင်က အမှန် အမှားခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကလေးကစားစရာ ဖြစ်သွားတယ်။ လစဉ်လတိုင်း Image magazine ကိုကျမဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ယခု ဒီဇင်ဘာလ ၊ ကျမမွေးလမှာတော့ ကျက်သရေအလွန်တုံးသော စာမျက်နှာတစ်ခုကို ကျမဖတ်လိုက်ရတယ်။ image ကို မကိုင်ချင်တော့လောက်အောင် ကျမစိတ်ပျက်သွားတယ်။ သူတို့ကိုတော့ အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။ နအဖ အဖွဲ့တွေဘက်က ဒါဆိုဒါပဲသူတို့လုပ်ရတာကိုး။ မဂ္ဂဇင်းထဲရဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ ကိုသက်ဝင်းအောင်ကို နအဖဘက်က ဆေးသေချာကုသပေးပေမယ့် နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းသော ရောဂါကြောင့် နှလုံးလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းပြီး သေဆုံးတယ်ဆိုပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲစာမျက်နှာလေးတစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားတယ်။ ကြည့်ရတာ ဘယ်သူမှသတင်းစာမဖတ်ကြလို့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲထိပါ လိုက်ပြောပြနေတယ် ထင်ပါရဲ့။ နောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်တို့က ဆူပူအုံကြွမှုတွေကို ဖန်တီးနေကြောင်း ၊ နယ်ချဲ့အစိုးရနောက်ကို လိုက်နေကြောင်း ဗီုလ်ချုပ်ကျော်ဆန်း ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ ဖတ်လိုက်ရတာကိုက တော်တော်လေးအကုသိုလ်များပါတယ်။ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့က ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ကြောင်း နအဖက ပြောဆိုရာမှ အင်းလေ ဘယ်လိုလုပ်ကျောင်းသားဖြစ်တော့မှာလည်း ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက အခုချိန်ထိ သူတို့ကထောင်ထဲဆွဲသွင်းထားတာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့ ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို အကြောင်းမရှိဆွဲဖမ်းပြီး စွပ်စွဲနေတာ အံ့ပါရဲ့။ ကိုသက်ဝင်းအောင်သေဆုံးမှုက သူတို့ သတင်းစာတွေထဲ ဘယ်လိုပဲ လိမ်လိမ် အာပလာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဆွေးနွေးတဲ့ဖိုရမ်တွေမှာ သတင်းစာကြီးကိုင်ပြီး ပြောတဲ့လူတွေကို မြင်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးဆို အဆုံးထိဆက်မပြောတော့ဘူး စိတ်သိပ်မရှည်လို့။ ကိုယ့်အတွေးအခေါ် သူ့အမြင်ဖလှယ်နေချိန်မှာ ရေးနေတဲ့ပို့စ်တွေက သတင်းစာကြီးကိုင်ပြောနေမှ ဒုက္ခ။ ကျမနောက်ဆုံးပြောလိုတာက ကျမက နိုင်ငံရေးဆိုတာကြီးကို သင်ကြားချင်လွန်းလို့ လုပ်နေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမရည်ရွယ်ချက်က မတရားတာကို ခံနေရတဲ့ ကျမတို့အားလုံးအပါအ၀င် ပြည်သူဘက်ကနေ တရားမျှတမှုနဲ့ မှန်ကန်သော ဥပဒေ ၊ လေးစားထိုက်သော အစိုးရတက်လာအောင်အတွက် သဲတစ်ပွင့်လောက် လုပ်ပေးခွင့်ရရင် သဲတစ်ပွင့်လောက် ၊ အုတ်တစ်ချပ်သယ်ခွင့်ရရင် အုတ်တစ်ချပ်သယ်ပြီး အမှန်ကန်ဆုံးသော လမ်းစဉ်စနစ် ရောက်ဖို့အတွက် ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲနေတဲ့ သစ္စာတရားကြောင့်ပါပဲ။ ကျမအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ကျမရေးတဲ့စာတွေ အရည်အချင်းတော်တော်နိမ့်ချင်နိမ့်နေမှာပါ။ ကလောင်တံအစုတ်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျမ လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ အရာတွေကလည်း နည်းချင်နည်းနေမှာပါ။ အခြေအနေနဲ့လွဲနေတာနဲ့ ကျမလုပ်နေတာတွေ အသေးအမွှားလေးပဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမရင်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ၊ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေ အားလုံးနဲ့ မတရားတာကို ဘယ်တော့မှနှုတ်ပိတ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လေးလေးနက်နက်ပြောရင်း မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရချိန်ထိ ကြိုးစားနေသူတွေနဲ့ လက်တွဲရင်း ခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုတာကို သစ္စာပြုအပ်ပါတယ်။ Like this:Like Loading...
Comment by Thet Naing
December 18, 2006 @ 1:29 am Reply	It’s wonderful you posts are really mature.Well done
December 18, 2006 @ 6:42 pm Reply	hi there
December 21, 2006 @ 4:13 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI